Faah-faahino ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dab ka kacay warshad ku taalla koonfurta Muqdisho – Hornafrik Media Network
Abaaro 11-kii habeenimo ee xalay waxaa lagu guuleystay deminta dab xoog leh oo ka kacay warshad ku taalla deegaanka Tabeellaha Sheekh Ibraahim oo dhaca koonfurta ee magaalada Muqdisho.
Dabkaas ayaa kacay wax yar uu ka hor salaadii cishe waxuuna burburiyey warshadii uu ka kacay iyo dhismayaal kale oo ka agdhawaa, sida uu noo sheegay mid kamid ah dadkii ka qeyb qaatay deminta dabkaas.
Gaadiidka dab-damiska dowladda hoose ee gobolka Banaadir ayaa gaaray halka ay ku taalay warshada gubatay oo aheyd suuqa deegaanka Tabeellaha Sheekh Ibraahim, kuwaas oo muddo kadib ku guuleystay in ay bakhtiiyaan dabkaas.
Dadka aan la hadalnay waxa ay noo sheegeen in khasaare xoog leh uu dabkaasi gaarsiiyey warshadda uu ka kacay oo aheyd kuwa sifeeya biyaha iyo goobo ganacsi oo kale, kuwaas oo ku dhawaa dhismaha warshadda gubatay.
Deminta dabkaas ayaa qaadatay saacado, waxaana adkeeyay dabeyl xoog leh oo maalmahaan ka socota inta badan koonfurta dalka. Waxaana intii lala tacaalayey deminta dabkaas ay baqdin xoogani soo wajahday dadka kale ee goobaha ganacsi ku leh suuqa Tabeellaha, kuwaas oo alaabahooda ka rartay suuqa.
Weli lama soo sheegin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay dabkaas, waxaana ku gubtay dhamaan qalabkii warshadda oo aheyd nuuca sifeysa biyaha muyasaxada ama caafiga iyo tukaamo kale oo yar yar sida ay noo sheegeen qaat ka mid ah dadkii ka qeyb qaatay demintiisa.
Khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay dabkaas weli wax faah-faahin ah kama bixin maamulka gobolka kan deegaanka Garas-baaley, iyo ganacsadii hantidoodu gubatay toona.